Social Security Mutemo | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: Social Security Law
Ndine kodzero yekuwana veteran vashandi, ini ndiri 51 kwegore, kusunungurwa kweHurumende yeZvenyika, gore rekare rekushumira kupfuura makore 25,
Ndine kodzero here yekugamuchira Veteran veVashandi, ini ndine makore makumi mashanu nerimwe ekuberekwa, ndakarega basa kubva ku Ministry of Internal Affairs, kureba kwebasa mumatarenda anodarika makore makumi maviri nemashanu, iwe unofanirwa kunzi uri murwi wemu Ministry yeInternational Affairs, asi kodzero yekubatsirwa kubva ...
Ndezvipi zvinyorwa zvinodikamwa kuti zvinyorwa zvepenjeni nekuda kwekurasikirwa nemupi wezvokudya?
Ndeapi magwaro anodikanwa kunyorera pension yemupenyu? Mugari anofanira kutumira kunyorera kumatunhu enzvimbo yePension Fund yeRussian Federation nemagwaro anotevera akabatanidzwa: 1. Pasipoti kana chimwe chitupa, ...
Ndiani ari pakati pevashandi vehurumende federal ???
ndivanaani vakuru vakuru muhurumende ??? Tarisa pa79 FZ. Mabasa? Ndokumbirawo: magweta, masystem manejimendi, vanachiremba, maakaundendi, nezvimwe, nezvimwewo Mapurofesa anogona kuva chero chinhu! Chinhu chikuru ndechekuti munhu ane ...
Ndeipi chaiyo iyo chiratidzo chekugadzirisa mhuri inoshayiwa inorongwa?
Ndeipi chaiyo iyo chiratidzo yemhuri yevarombo inoverengwa? Mari yese yemhuri YEMAHARA (kusanganisira vana) inotorwa uye inopatsanurwa nenhamba yenhengo dzese dzemhuri, kana mhedzisiro ikasasvika padanho rekurarama, ipapo mhuri ...
uye ndezvipi zvinobatsira zvechirikadzi kuHondo Yenyika Yechipiri?
uye ndeapi mabhenefiti echirikadzi yemubatanidzwa weWWII? kusanganisira kutambira dzimba dzemahara (kana zvichidikanwa) Aya ndiwo mabhenefiti: - Zvinoenderana neArt. 21 yeFederal Law "PaVeterans" kune chirikadzi dzevakabatwa ...
Vanopa chirwere chekurwara kuti vatarisire vabereki vavo here?
Zororo rekurwara rakapihwa kuchengetwa nevabereki here? Zororo rekurwara rinogona kupihwa mushandi nekuda kwekurwara kwake, nekuda kwekukuvara, pahwaro hwekudikanwa kwekugadziriswa kwekurapa, pamwe ne ...
Ndezvipi zvikamu zvezera rezera remakore. Zviyero zvakadini% uye zvakadini% inshuwarisi?
Ndezvipi zvikamu zvemudyandigere-zera. Yakawanda sei% yakakosha uye yakawanda sei inishuwarenzi? Muscovites ichiri kugashira hukama hwehukama hwakavharwa nesarudzo yeiyo purojekiti manejimendi kana iwe uri murume ari pasi pe55 ...
Chii chinonzi kero yevheji yemari yepafura muRussian Federation yekuverenga chikamu cheshuwarenzi yepenheni kubva ku1985 kwemakore 2001?
Ndeipi iri kero yetafura yemubhadharo wepakati muRussia Federation yekuverenga chikamu cheinishuwarenzi chepenjeni kubva muna 1985 kusvika muna 2001? Kune saiti muInternet. kusvika pahuwandu hwemari yemubhadharo we2000-2001 ...
Ndiani akakodzera kubatsirwe rubatsiro rwemagariro evanhu?
Ndiani anokodzera kubatsirwa rubatsiro rwemagariro? Mhoro! Ini ndinogona kuwana rubatsiro rwakanangidzirwa kana ndakanyoreswa uye ndogamuchira mabhenefiti ekuchengeta kune mukuru ane makore makumi masere ekuberekwa? Handi…
Ndiani anofungidzirwa kuti ari mumwe wepenser? Uye sei kuwana rugwaro rwekuti muchengeti wehurumende ari oga akasurukirwa?
Ndiani anoonekwa semunhu mumwe mukuru mugari? Uye iwe ungawana sei chitupa chinotaura kuti mupenheni anonyatso kusurukirwa? chinotora kubva mubhuku repamba hachigone kuve humbowo hwekuti munhu anoshaya pension, mufurati vanogona ...
Chii chinowedzera kubhadhara pashure pemakore 80?
Chii chinowedzerwa mupenjeni mushure memakore makumi masere? Uye amai vangu pamakore makumi masere vakawedzerwa 80 rubles, nepenjeni ye80 rubles. Vakawanepi mari yakadaro? ndiudze sei nezve alimony, ...
Inobata basa mu 50 inokwanisika kune amai vemwana akaremara here?
Zvinoita here kuti amai vemwana akaremara vazorore pamakore makumi mashanu? Iwe waifanirwa kunge wakanyeverwa pawaikumbira pension yemwana wako muchikamu che "mwana akaremara" (kana, pamwe, iwe wakayambirwa, asi iwe wakakanganwa), ...
Paunopa kuremara kusingaperi. Kana akaremara 2 yeboka 3 gore.
Kana vapa hurema husingagumi. Kana boka rehurema 2 iine makore matatu. Mugore rechishanu. Boka rehurema risingazivikanwe rinotangwa muzviitiko zvinotevera: 3. Vakaremara vanhurume kubva pamakore makumi matanhatu ekuberekwa nevakadzi ...
Chirikadzi yevasiceman mushure mekufa kwemurume inogona kuwana mari yepenjeni yakazara?
Ko chirikadzi yemuranda ingagamuchire yake yakazara mudyandigere mushure mekufa kwemurume wake? Zvingangodaro kwete. Kune iro zita, zvipatara, maiwe, hazvichagone kutambirwa, dai pakanga pasina chakakosha mabhenefiti. Makadii…
Ndezvipi basa rekushanda kwepabonde?
Ndeapi mabasa emushandi wezvemagariro? Ndiudze kuti ndeapi mabasa uye runyorwa rwemahara mabasa mumusha Unofanirwa kunge uine kondirakiti inoratidza mabasa. iyo yaunobhadhara. Uye…
zvose kubhadhara uye rubatsiro kubva kuhurumende kana kukanganisa kweanopa zvokudya
kubhadhara kwese uye rubatsiro kubva kuhurumende kuitira kurasikirwa nemuriritiri chete mudyandigere wekurasikirwa nemuriritiri. Mari yacho inoenderana nesaizi yemubhadharo uye nekureba kwebasa remuriritiri. Yakagadzirwa paPension Fund. Mushure mekunyoresa, enda ku ...
EFA uye EBC.
EDV uye EDK. EBC (muripo wemari yemwedzi nemwedzi) yekubhadara dzimba uye mabasa eruzhinji. EDV (pamwedzi kubhadhara mari) kwauri nekuremara kweboka rechitatu. E izere kukura i3, 1447 rubles. Saizi yeiyo "pasuru yemagariro" - ...
Isai kune kliniki
Batanidza kune polyclinic ini ndinoshanda mune polyclinic. Ehezve ivo vanofanirwa kunamira kunzvimbo yekugara. Ns vane varwere vazhinji vakadaro, vanouya kuzonyoresa, tinovaisa mukombuta, vanoratidza nzvimbo yekunyoresa, ...
Chii chandinofanira kuita kana ndakarasikirwa nekambani yevanhu veMuscovite? Chii chandinofanira kuita? Kubhadhara mari yakanaka?
chii chaunofanirwa kuita kana warasikirwa neMuscovite kadhi rako revanhu? zvekuita? Kubhadhara faindi? kuna ani? enda kwawakagamuchira, vachakuitira imwe nyowani, asi parizvino ivo vachakupa tikiti rechinguva rekufamba Kwakanaka, huya ...
Iko Vasily Chuik Medal inopinda muchengeti webasa
menduru yacho inopa vasily chuikov inopa mvumo kune veteran vevashandi? Wedzera menduru yeVasya Pupkin kwazviri, ipapo zvinhu zvichafamba mushe. inopa, asi pamwe chete neiyo Honorary Donor menduru kana ye ...
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 0,534 masekondi.